Ukulahlwa izisebenzi ngezizathu komsebenzi - kuyinqubo eside futhi ibaluleke kakhulu kunanoma yimuphi umqashi. Ngoba ihilela isaziso abantu kuncike ukunciphisa, izinyanga ezimbili ngaphambi kosuku lokuqalisa yayo kanye ukukhokha bonke imali sithembele ukuthi kufanele ikhishwe ngosuku lokugcina lomsebenzi. Ngaphezu kwalokho, umqashi kufanele unikele kulesi sigaba zomsebenzi okhonzile ekhona, kanye ukuvimbela ukunxenxa labantu abasha.
Ngaphambi ukuxoshwa ngezizathu komsebenzi umqashi kufanele agcwalise ezimeni eziningana:
- ukushintsha abasebenzi ekhona noma zamukele esisha izinto ezaziyokwenzeka ezaziyobonisa ukuthi akunakwenzeka ekwandiseni isimo sesimweni omkhulu ezikhundleni zawo;
- azise abangaphansi kwakhe mayelana izinyanga 2;
- ukunikela abasebenzi neminye imisebenzi ukuthi ayatholakala enhlanganweni;
- wazise ejensi umsebenzi esikhathini esibekiwe emthethweni.
Uma isakhamuzi kakade wazi kusengaphambili ukuthi phezu ukunciphisa futhi bona liwela ngaphasi ke, ungakwazi ngokushesha ngokuxoxa le ndaba ekhanda. Phela, ungathola zonke izinkokhelo ezidingekayo ngaphambi zinyanga ezimbili, futhi ngokushesha ukuthola isihlalo entsha singenamuntu, ngaphandle-ke, akunakwenzeka ukuba zihlala zinjalo.
Chitha ukunciphisa - kuyabiza
Eqinisweni, ukuxoshwa kwabasebenzi ngenxa ukudiliza - akuyona kuphela isikhathi eside, kodwa futhi ngeke inqubo ezishibhile kakhulu. Boss bakhokhele ngesikhathi esifanayo abantu akuzona kuphela iholo kanye isinxephezelo ilivu eye yasetshenziswa cha, kodwa futhi imali severance izinyanga ezimbili. Ngaphezu kwalokho, uma isakhamuzi emva ukunciphisa kuyoba ngenxa isikhungo umsebenzi zingakapheli izinsuku eziyi eziyishumi kusukela ngosuku ukuxoshwa kwakhe, futhi ngeke baqashwe, kuleso simo uzothola imali kusukela ngumqondisi futhi ngenyanga yesithathu. Yingakho abaqashi abaningi abayibheka njengebalulekile ozama ukuletha abasebenzi babo ngaphansi komsebenzi ngokuzithandela. Khona-ke akudingeki uzikhokhele imali.
Esimweni lapho kukhona ukuncipha umsebenzi, kodwa ikhanda namanje ophoqelelwe okunganambitheki umsebenzi ikhefu ngokusuka kubo, ukuxoshwa ezinjalo kungase kuwakhange ezinkantolo. Ingabe kuphela ubufakazi testimonial futhi ubufakazi obubhalwe leli qiniso, kudingeka benze kanjalo. Kungenjalo alulame okhonzile emsebenzini bese uthola zonke imali uzobe sithembele akunakwenzeka.
Mayelana nokuncipha oluzayo ikhanda kuvimbela isisebenzi izinyanga 2. Isaziso kufanele kube ngokubhalwe phansi futhi ngilambatha kumuntu ngokumelene isignesha. Kungenjalo, isisebenzi ngeke uziqaphele ukuxoshwa esizohlasela, okungase ke abangele kumqashi wakhe asemrarweni, kuze kuqulwe icala.
Esimweni lapho kukhona ukuncipha umsebenzi, amalungelo isisebenzi akufanele ukuthi kuphulwe umthetho eyayihlaselwe kunaye. Lesi sakamuva ubophekile ukunikela ngowokuqala zonke imisebenzi ezingahle zinqunywe wumgomo esazisweni.
Isaziso lokwehliswa simiswe ngalendlela lelandzelako:
iminyaka 00.00.00. _______________
Sawubona __________________ (igama umsebenzi ngokugcwele)!
Sazisa wena ukuthi ngenxa ukuncipha abasebenzi bawo bathatha isikhundla sakho _____________ __________ kuncike ukunciphisa (isibalo esinikezwe izinyanga ezimbili kusukela lolo suku isaziso).
Sikunikeza ukukhetha kwezikhala etholakalayo ______________ (igama umsebenzi). Kuleso simo, uma uvumela ukusebenza kwenye okuthunyelwe, sicela uyibike uMnyango izisebenzi inkampani (igama) nochwepheshe ngokubhala ngaphambi kokuphela kwezinyanga ezimbili kusukela ngosuku kokuthola isaziso.
Ozithobayo, Umqondisi LLC ________________ (isignesha sokuqonda).
Kusukela ngesikhathi lapho inceku yazisiwe we ukuncishiswa esizohlasela, ziqale ukusebenza izinyanga ezimbili, ngemva kwalokho-ke ngeke kungamane kubhekwe ngayo yonke nelungelo ikhokhwe kuye, ngaphandle-ke, ngeke yini uvume ehlukile umsebenzi intengiso.
. Uma kokuxosha umuntu ngesisekelo yesigatshana 2 Ingxenye 1 Article 81 soMthetho Wobudlelwano Ikhodi umholi kufanele ngokugcwele yena ukuba axazulule futhi pay:
- Imiholo kuze kube phakade.
- Inkokhelo vacation, uma ayizange isetshenziswe. Uma umsebenzi uye ikhefu, kodwa isikhathi akakaze ngokugcwele saveza ke wokwehla Ukugodla nomholo wakhe kulolu alwenziwa.
- Umrholo e nenani izinyanga ezimbili iholo. Uma kwenzeka ukuthi umsebenzi ngemva ukuxoshwa isetshenziswa ejensi umsebenzi, kodwa engakaze baqashwe, kulandele yemali lengenako enzuzweni lenkhulu kanye ngenyanga yesithathu. Kulokhu, udinga ukunikeza abaphathi yangaphambili yabo irekhodi umsebenzi noma esitifiketini sokuqashwa isikhungo, kuba i-akhawunti yakhe.
ukubala Okugcwele isisebenzi kumele kwenziwe ngosuku lokugcina lomsebenzi wakhe, kungenjalo kuyoba esephule Article 140 se-Code Labour.
Ilungelo umsebenzi ukuqhubeka
Uma ukunciphisa umsebenzi, ilungelo ukuzibeka kuqala ekuphileni kwethu umsebenzi waqhubeka babe kuphela labo bantu babe aphakeme zabasebenzi umkhiqizo namakhono.
Esimweni lapho bonke abasebenzi babe ukusebenza efanayo kanye neziqu okusezingeni eliphezulu, okuthandayo kumele anikwe umsebenzi:
- has, ku ezimbili noma ngaphezulu kokuqukethwe ukuncika okuyiwona iholo umuntu umthombo enkulu imali;
- kuba umondli ematheni umndeni, uma kungekho omunye wamalungu ayo akanawo umsebenzi noma ezinye imali;
- ngalithola isifo ukuqaliswa umsebenzi , noma eminye kungadaleka ingozi embi kakhulu enhlanganweni;
- kuyinto ekhubazekile neMpi Yezwe II noma umuntu okhubazekile walimala esikhathini Ukuvikelwa wobaba;
- ukukhulisa izinga lemfundo bebheke ubuholi umsebenzi umsebenzi.
Okunye imikhakha izakhamuzi kokuba ilungelo ukuhlala emsebenzini lapho abasebenzi wenziwa kokuncane, ibhaliswe kuphela Isivumelwano esenziwe ngokuhlanganyela.
Phela imisebenzi ehlobene ukuxoshwa ngezizathu komsebenzi, okwamanje iza uma sisebenti esandleni kufanele banike ncwadi umsebenzi wonke nelungelo. Ngemva kwalokho, kufanele asayine oda, kuyasiqinisekisa ngalokhu.
Ekulungiseleleni oda Uchwepheshe HR inhlangano kumelwe kubonise kulo magama ngqo ukuxoshwa base eveza amaphuzu izihloko se-Code Labour. Ngemva kwalokho, ugcwalise ibhuku umsebenzi, wakufaka isiginesha yakho futhi ukuqinisekisa zonke isitembu. Ukungena zabasebenzi kumele kube kanje: ". Ezenziwe kunengise ngokuhambisana nendima 2 zeNgxenye 1 Article 81 se-Code Labour" asetshenziswa Okunye ukwakhiwa, ngoba isakhamuzi ixoshe kusuka imisebenzi yabo ukunciphisa, kodwa hhayi nangenxa yezinye izizathu.
Zonke izincwadi eziphathelene ukuqaliswa ubuso umsebenzi wakhe, kanye zonke kudingeka izimali lemali kufanele inikezwe umsebenzi ngosuku ukulahla.
Ngesikhathi lapho ukuncishiswa Akwamukelekile ukuthatha abantu abasha ukuze atholakalayo isikhala. Kungaba kuwukwephula esingathí sina esenziwe ikhanda, njengoba kufanele unikele idatha izikhala kuphela abantu basongelwa ngokuthi babezoxoshwa emsebenzini kule phansi. Ezemfundo Level amagugu abasebenzi kuleli cala asipheli.
Akwamukelekile e imizana wezimali wokugcina ukubamba emholweni womsebenzi for the holiday yonyaka osekuvele unganikwa sona, ezingu-12 ziye engakaze ngokugcwele saveza.
Esimweni lapho ukuncishiswa senzeka emsebenzini, amalungelo sesisebenzi noma kunjalo ayikwazi ukuba okuzilahlekelayo ngabaphathi. Lokhu kusebenza ngokuyinhloko ukukhokhelwa ngesikhathi esifanele, kungenjalo sichithiwe singafuna Ukuvikelwa ezinkantolo.
Ixhumana ejensi umsebenzi
Ngemva inkontileka umsebenzi esiphethwe umsebenzi ngezizathu yokuxoshwa ngezizathu komsebenzi, isakhamuzi unelungelo futhi ngempela isibopho ukusebenzisa emagunyeni umsebenzi ezinsukwini ezingu-10 kusukela ngosuku ukubala yayo. Kulokhu, londoloza nomholo isilinganiso ngenyanga yesithathu, bamlandela.
Employment Service, esikhundleni salokho, kufanele asize abangasebenzi ukuthola umsebenzi eyithandayo. Njengomthetho, kulabo abafuna ukusebenza ngokushesha umsebenzi omuhle ngokwanele futhi ofanele. Ukudiliza nokudilizwa njengoba isisekelo career okwalandela akunamthelela, kodwa ivumela umuntu kufanele ibhaliswe ejensi umsebenzi, ukuthola inzuzo enkulu, ukubekwa uma elahlekelwe umsebenzi.
Kodwa ngezinye izikhathi inkonzo umsebenzi ayinikezi imisebenzi muhle, ngakho baye yokusesha ngokwakho. Ngesikhathi esifanayo udinga ukuchitha eziningi azama ukuthola isikhundla ezithakazelisayo ngempela futhi okhokhelwayo.
Thola umsebenzi njalo kunzima ngokokuziphatha. Lokhu kunzima ikakhulu uma isebenzile lapho badabula cut. Ukucinga imisebenzi kulesi simo sishubiswa iqiniso lokuthi indawo futhi ezothola imali efanele kunzima ukuthola umsebenzi. Yingakho izakhamuzi eziningi angaphansi ukuncipha, zama ukuhlala endaweni efanayo, ngisho noma esimweni ehlukile nangesivinini oholela kancane. Kungcono kunokuba abangasebenzi, bese uthola isabelo encane evela isikhungo umsebenzi.
umsebenzi omuhle emva ukunciphisa kungenzeka athole umuntu has olutheni emkhakheni wabo ngentshiseko ukufuna sikhala entsha.
Ekusebenteni, zikhona izimo lapho abaqashi ngazo zonke izindlela zama ukuqeda abangaphansi ecasulayo. Ngesikhathi esifanayo, futhi izindlela ukusetshenziswa ezifana nomthetho noma "ngengqondo 'cut. Kulokhu, ayikho imisebenzi, okubonisa belungiselela ukuxoshwa, inhloko akusilo kwenziwe. Isisebenzi ngamazwi nje waxwayisa ngokuthi isikhundla salo kuzoncishiswa, futhi unike isikhathi esiyizinyanga ezimbili, ukuthi wayefuna umsebenzi ohlukile kunalowo oqashelwe.
Endabeni ukunciphisa okungekho emthethweni noma iyiphi inkokhelo, ngaphandle amaholo, izakhamuzi ayihlelwa, yize lishicilelwe ephepheni. Ngesikhathi abantu abambalwa efanayo abaphendukela izinkantolo ukuvikela amalungelo, nakuba izimo ezinjalo ziyathandeka lalivamile.
Ukulalelwa kwezinkulumo e zabasebenzi izingxabano phakathi kwabaqashi kanye abangaphansi kwakhe - ke akuyona into engavamile ukuba umuntu ubulungiswa yesimanje. Umthetho cishe njalo ohlangothini isisebenzi, hhayi boss.
Nasi isibonelo practice zokwahlulela, efanekisa isimo.
Citizen wasebenza induna efektri. Ngemva ushintsho amakhanda, waqala unezinkinga emsebenzini. Induna entsha ongathanda uhlele omunye umuntu, kodwa ayikwazanga nomlilo isisebenzi, sasingekho isizathu ukuba. Khona-ke izisebenzi Uchwepheshe belulekwa ukuphathwa ukufeza inqubo ukusikeka "ngengqondo ', njengoba ukwazisa inkosi izinyanga 2. Kulokhu, ayikho enye izikhala wokugcina okuphakanyiswe, futhi waxoshwa. Futhi kule ndawo ngokushesha wathatha omunye umuntu. Lapho bezwa ngalokhu, inceku wangaphambili okufakiwe inhloko inkantolo.
Ngesinqumo wenkantolo kufanele kube ukuthi, esimweni uma isifinyezo isimo abangena ngaphansi isenzo isakhamuzi kufanele inikeze ezinye isikhundla etholakalayo. Kulokhu lokhu kwakushaywa indiva. Ngaphezu kwalokho, kwakungekho abasebenzi nokubonisa ukwehla kule mkhakha. Ngokuqondene nalokhu, inkantolo engavuni yasekela isimangalo wale mithandazo, walibuyisela ukusebenza, ngaphezu kwalokho, wayefuna kumqashi isizumbulu semali njengoba isinxephezelo for umonakalo zokuziphatha.
Endabeni ka kwemithetho yezabasebenzi sichithiwe ngokungemthetho inelungelo Ukubuyiselwa. Ukuncishiswa futhi ukuphothulwa okwalandela kobudlelwano emsebenzini kuleli cala kungalungiswa njalo udlulisele phambili ngokusebenzisa izinkantolo.
Tolyatti Emblem: incazelo nokubaluleka
Kungani sidinga isitifiketi akukho irekhodi lobulelesi
Ihhotela Novia White Lilyum, Turkey, Kemer izithombe kanye nokubuyekeza
Amafutha "i-Castrol Magnatec 5W40": ukubuyekezwa. Ioli yamafutha Castrol Magnatec 5W-40
Kuyini Elithi umami? Umlando kanye nokunambitheka kwe-umami